Bayern Munich Oo 39m Ku Dalbaneysa Kalidou Koulibaly
Home Horyaalka Germalka Bayern Munich oo 39m ku dalbaneysa Kalidou Koulibaly
Bayern Munich ayaa lagu soo waramayaa inay u aqoonsatay daafaca Napoli Kalidou Koulibaly inuu yahay bartilmaameedka ugu macquulsan ka hor suuqa xagaaga.
Iyadoo la filayo isbadalo waa weyn oo dhanka daafaca ah dhamaadka xilli ciyaareedkaan, Bayern ayaa durbaba heshiis la gaartay daafaca dhexe ee RB Leipzig Dayot Upamecano .
Si kastaba ha noqotee, Tuttomercatoweb ayaa soo jeedinaysa in kooxda ku guuleysatay Champions League ee 2020 ay raadineyso inay ku soo darto magac weyn oo labaad aagga garoonka.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Bayern ay dooneyso inay kula soo saxiixato Koulibaly kaliya just 45m (£ 38.85m), taasoo aad uga hooseysa qiimaha ay Napoli ku dooneyso ciyaaryahanka reer Senegal.
Labada koox ayaa laga yaabaa inay ku heshiiyaan tanaasul, gaar ahaan Napoli oo aan u muuqan inay soo jiidan karto dalab kasta oo dhan 80m sababo la xiriira saameynta dhaqaale ee cudurka faafa ee coronavirus.
Koulibaly, oo 30 jirsanaya xagaaga, sidoo kale qandaraaskiisa waxaa uga harsan labo sano oo qura.
Previous articleThomas Tuchel: ‘Tammy Abraham waa inuu u dagaallamaa booskiisa Chelsea’
Next articleQaabka loo kala hogaaminayo horyaalka Faransiiska